Izindaba - Umhlahlandlela Olula Wokudoba Osuka Esikebheni
Uma udinga ukuvuselela isikebhe sakho ngesihlalo esisha, don'ungangabazi ukuvakashela iwebhusayithi yethu, kukhona Izinhlobonhlobo zezitayela ongakhetha kuzo,https://www.xgearsports.com/boat-seat/
Ukudoba osebeni lomfula noma esikhumulweni semikhumbi kunikeza okwako injabulo, kodwa akukho okufana nokungena emanzini ajulile ukuze ubambe inhlanzi.
Ngesikebhe sakho, ungakwazi ukubheka indawo ekahle yokudoba futhi, uvikele indawo yakho, wena nabangane bakho ningakhululeka futhi nilinde esikhulu ukuthi silume.
Nawa amanye amathiphu ongawalandela ukuze uphumelele lapho udoba esikebheni sakho:
Njenganoma yimuphi umsebenzi wangaphandle, ukudoba izikebhe kudinga ukulungiswa.Khumbula ukuthi kanye nawe'ulahliwe, ungase ungabuyeli ogwini isikhathi esithile;ngakho-ke, udinga ukwenza isiqiniseko sokuthi unakho konke okudingayo.Ukwenza uhlu lokuhlola kusenesikhathi, futhi ubhale phansi yonke into encane efana ne-bug repellant kanye ne-bait-kungenye yezindlela ezingcono kakhulu zokuqinisekisa ukuthi awukwenzi'ngingakhohlwa noma yini.
Akusho ukuthi umkhumbi wakho kufanele ube sesimweni esihle ngaphambi kokuphuma.Awunaso'angifuni ukuba nenkinga yemishini ngenkathi ngisolwandle, echibini, noma emfuleni.
Futhi, udinga ukuba nehange elinosayizi ofanele.Kunezimo lapho ihange elikhudlwana lingcono, njengalapho udoba emanzini ajulile, njengoba lingabamba isikebhe sakho kangcono.Udinga futhi ukuba neketango elanele-ubude obuncane, njengomthetho wesithupha, kufanele bube bubude njengesikebhe sakho, kodwa bungaba bude.
It'kungcono kakhulu ukwenza ucwaningo lwakho ukuze uthole ukuthi iyiphi ihange elingafanela isikebhe sakho kanye nezidingo zakho.Njengoba izinhlobo ezahlukene zemikhiqizo zivame ukuba nosayizi abahlukene, it'Kungcono ukunqanda ukuhlola amashadi osayizi amabili noma ngaphezulu.Lezi zivame ukutholakala ezitolo zasolwandle.
Ukubhekana nokudoba okunakekelwa kahle kungase kuchaze umehluko phakathi kwesipiliyoni sokudoba sodwa kanye nalokho ongaziqhenya ngakho ngempela.
Kodwa imishini akufanele ihlolwe kuphela ngenxa yakho'ngizoyisebenzisa-kufanele uhlole igiya lakho njalo.
Lokhu kusho ukushintsha ama-reels'imigqa emikhulu, ikakhulukazi leyo eguga kalula njengemigqa ye-monofilament;kanye nokushintsha umholi wabadobi uma uzwa ama-nicks uma uhambisa isandla sakho kuwo.
Ukuyodoba esikebheni sakho kuthatha okungaphezu nje kokumisa ihange endaweni ethile bese uphonsa ulayini wakho.Ngenkathi ungakwenza lokhu, kunjalo'akuyona indlela esebenza kahle kakhulu ngoba ungahle uchithe isikhathi sakho.
Ukuze wenze okuningi kuhambo lwakho lokudoba, udinga ukwenza ukuhlela okuthuthukile.Okokuqala, thola ukuthi hlobo luni lwezinhlanzi ohlose ukuzibamba futhi ubone ukuthi ziyaba yini'aphinde asebenze phakathi nesizini.
Ngokuphambene, ungabheka ukuthi leyo nhlanzi isebenza nini kakhulu-njengesimo sezulu esingcono kakhulu, isiqondiso somoya, namagagasi ahambisana nabo-futhi uhlele uhambo lwakho lwaleso sikhathi.Kudingeka futhi unqume ukuthi ufuna ukudoba kuphi, nokuthi iyiphi induku nesilo esingakufanelekela kakhulu kuleyo ndawo.
5, Ngaphambi Kokuqala
Impela, kunjalo'Kuyajabulisa ukuthi ekugcineni uphume udoba ngesikebhe sakho, kodwa'kubalulekile ukunikeza isikhathi esanele ngaphambi kokuthi uhlehliselwe ukwenza ezinye izinto ezimbalwa.
6, Gqoka Izingubo Ezifanelekile
Igiya olikhethayo kufanele lifanele indawo ozobe udoba kuyo.Isibonelo, emfuleni noma endaweni engashoni lapho kungase kudingeke ukuthi ungene khona, amabhuzu aqinile angaba ukukhetha okuhle kwezicathulo.Isimo sezulu futhi siyisici okufanele sicatshangelwe lapho ukhetha izingubo zakho, nezingqimba ezengeziwe ezidingekayo ezindaweni ezibandayo.
Futhi, uhambo lokudoba lungathatha usuku lonke noma ngisho nangaphezulu, kuye ngezinhlelo zakho, ngakho pakisha izikhwama zakho ngokufanele.Khumbula ukuthi nakuba isimo sezulu sifudumele emini, amazinga okushisa angehla njengoba kusondela ubusuku.
Futhi kunoma yikuphi ukugibela isikebhe, ngisho nasemabangeni amafushane, qiniseka ukuthi wena nozakwenu ninejakhethi yokuphila umuntu ngamunye.
7, Hlola Izimo Zezulu
Udinga ukukhumbula ukuthi noma kunjalo'libalele ngosuku olwandulela uhambo lwakho, lokhu kungashintsha ngosuku owalwenza ngalo'kabusha ukuyodoba.Isimo sezulu singashintsha kakhulu, ngakho qiniseka ukuthi uhlola izibuyekezo ngaphambi kokuthi uhambe ngomkhumbi.
Ngakho yisiphi isimo esilungele ukudoba?Izinsuku ezinelanga zingase zibe mnandi kubantu, kodwa ezinye izinhlanzi zivame ukuya emanzini apholile ekujuleni ukuze zigweme ukushisa.
Noma kunjalo, inani elifanele lokukhanya kwelanga, ikakhulukazi ezindaweni ezingajulile, lingenza ezinye izinhlobo zezilwane zisebenze.Ukuguquguquka kubhekwa njengendawo ekahle yokudoba, njengoba izinhlanzi zidla ngaphambi kokuba kufike isimo sezulu esibi.
Kodwa-ke, izidumbu zamanzi zingaba yingozi kakhulu esivunguvungwini, ngakho-ke uma kuza, ungase ufune ukunquma ukuhlehlisa noma ukukhansela uhambo lwakho.Ngaphandle kwalokho, izinhlanzi azikwazi ukuthatha isiyengo esimweni sezulu esibi.
Imimoya ishintsha amagagasi, okwenza kube nzima ukuthi bahlale endaweni, futhi mancane amathuba okuba babone noma babone isiheho sakho.
Kungase kube nzima, kodwa lapho enkulu iluma, uzowuzwa umvuzo wokuphikelela kwakho.
Isikhathi sokuthumela: Mar-09-2022